Itoophiyaa: ‘Qaama nu hidhe hin beeknu’ – Gaazexeessaa Dassuu Duulaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsItoophiyaa: ‘Qaama nu hidhe hin beeknu’ – Gaazexeessaa Dassuu Duulaa
Gaazexeessitootni ONN fi SBO Bitootessa 07 magaala Burraayyuutti hidhaman lama Sanbata duraa darbe hiikaman.
(bbcafaanoromoooduu)–Ji’oota lamaa olif magaaloota Burraayyuu fi Galaanitti hidhamee kan ture daayrektarri itti aanaa ‘Oromia News Network’ ONN Dassuu Duulaa, Bitootessa 07 bara 2012 magaala Burraayyutti kan hidhaman miseensa koree hoji raawwachiistuu ABO Obbo Abdii Raggaasaa gaafachuuf deemanii akka qabaman BBCti himeera.
Gaazexeessaa Dassuu Duulaa yeroo sanatti gaazexeessaa Waaqoo Noolee fi konkolaachisaa isaanii walin akka turan hima.
“Obbo Abdii halaalatti dubbisnee duubatti deebinee konkolaataa keessa seenne. Namootni biroo kan nu walin deeman konkolaataa biraan waan dhufanif isaan eegnee walin deemna jennee achuma dhaabbannee ilaalaa turre” jedha.
Gidduu kanantti namni Gadaa Gabbisaa jedhamu “suuraa kaasterta” jedhamun qabamuu isaa kan himu gaazexeessaa Dassuu Duulaa, “booda konkolaataatti deebinee galuuf konkolaataa kaafannee qajeelle. Daqiiqaa tokko kan ta’u erga deemnee booda poolisootni sadi dhufanii konkolaataa akka naanneffanmnu fi poolisiin akka barbaadamnu nutti himan” jedha.
Sana boodas Waajjira Poolisii magaala Burraayyuu erga geeffamnii booda “suuraa ‘social media’ irratti maxxansuuf kaastaniirtu. Jeequmsas uumtaniirtu” jedhamuu isaanii fi jechi irraa fuudhamuusaa dubbata.
Dhimmi isaanii Mana Murtii Burraayyuutti ilaallamaa kan ture gaazexeessitootni lamaan suura heeyyama male kaasuu fi jeequmsa kaasun galmeen irratti banamuusaa Dassuu Duulaa BBCti himeera.
Haa ta’u malee beellama sadaffaa irratti suuraa kaasuu isaanif ragaan qabatamaa wan hin argamneef fi osoo kaafameyyu yakki ittin raawwatame waan hin jirreef abbaan alangaa “jara hin himadhu” jechuun galmee isaanii cufuusaa fi Manni Murtichaas akka hiikamanif ajaja kennuusaa dubbata.
“Manni Murtii hiikaa jedhee dirqama kenne. Tole jedhanii bahanii nu gadhiisuu didan” jedha Dassuu Duulaa.
Kanaaf sababni immoo “Komishinii Poolisii Oromiyaatu isaan barbaada” kan jedhu akka ta’e hima. Haa ta’u malee Komishiniin Poolisii Oromiyaa waamamee akka hin dhiyaanne fi boodas Caamsaa 05 bara 2012 gara Waajjira Poolisii Magaala Galaan geeffamuu isaanii hima.
Turtii Mana Hidhaatii Hanga Gadhiifamuutti
Turtii isaa mana hidhaa keessatin guyyaa tokko reebichi irratti raawwatamuusaa kan himu gaazexeessaa Dassuu Duulaa “akka dhuunfaatti warra walin hidhamne cubbuudha nun tuqne. Afaaniinis nutti hin dabarre. Nuf hoomaa hin jedhan. Garuu akka mirga dhala namaatti dhiittaan mirga namaa Burraayyuu keessatti raawwatamu kan nama gaddisiisu” jedha.
Turtiin Waajjira Poolisii Magaala Galaan kan magaala Burraayyuurra fooyya’aa akka ta’es hima.
Haala itti gadhiifaman kan gaafanne gaazexeessaa Dassuu, “kan nu hidhe eenyu akka ta’e hin beeknu. Kan nu baasises eenyu akka ta’e hin beeknu” jedha.
Wabiidhaan gadi lakkifamuu isaanii kan himu gaazexeessaan kun “Hin himatamne. Maalif wabiidhaan akka baanes hin beeknu” jechuunis himeera.